Rodiobook • A podcast on Anchor
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - “တပြည်သူမရွှေထား” ဝတ္ထုရှည် အသံစာအုပ်
ဆရာကြီး တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ရဲ့ ဝတ္ထုကောင်းတွေအများကြီးထဲကမှ ‘တပြည်သူမရွှေထား’ ဆိုရင် သီးသန့်ညွှန်းစရာတောင် လိုမယ်မထင်ပါဘူး၊ စာအုပ်အဖြစ်လည်း ယနေ့အချိန်အထိ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ခဲ့ရသလို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရာမှာလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု (စင်ရော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး) အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု (စင်ရော်မောင်မောင်) အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု (ကျော်သူ) တို့ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခု အဲဒိလို နာမည်ကျော် အောင်မြင်ကျော်ကြားလှတဲ့ “တပြည်သူမရွှေထား”ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အသံထွက်ဝတ္ထု အနေနဲ့ ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာနေပြီး ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရင်ဆိုင်ကေျာ်ဖြတ်ကြတာပေါ့၊ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေဗျာ။
တင်မောင်မြင့် - “ဘ၀အနှောင်” ဝတ္ထုရှည် အသံစာအုပ် (၁၉ ပိုင်း)
ဆရာတင်မောင်မြင့် မွေးနေ့အမှတ်တရ ဆရာတင်မောင်မြင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး ဆမ်းမားဆက်မွန်မ် ရဲ့ အကောင်းဆုံးဝတ္ထုလို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ ‘ဘ၀အနှောင်’ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ၊ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာနေပြီး ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရင်ဆိုင်ကေျာ်ဖြတ်ကြတာပေါ့၊ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေဗျာ။
ဆရာမဂျူး ရဲ့ မေွးနေ့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဆရာမဂျူးရဲ့ “လိပ်ပြာဖမ်းသူ” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ၊ ဆရာမ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျ။ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာနေပြီး ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရင်ဆိုင်ကေျာ်ဖြတ်ကြတာပေါ့၊ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေဗျာ။
ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ‘ရှားလော့ဟုမ်းပြန်လာပြီ’ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ဇာတ်လမ်းများကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ၊ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာနေပြီး ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရင်ဆိုင်ကေျာ်ဖြတ်ကြတာပေါ့၊ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေဗျာ။
ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ‘အချစ်သည် သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေသတည်း’ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ၊ ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ဝတ္ထုကောင်းတပုဒ်ပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာနေပြီး ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရင်ဆိုင်ကေျာ်ဖြတ်ကြတာပေါ့၊ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေဗျာ။
ယခုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမယ့် ဝတ္ထုရှည်က ဆရာမင်းလူ ရဲ့ ‘ခုနှစ်စဉ်အလွမ်း’ ပါ၊ ဒီဝတ္ထုကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာဆု၊ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု နဲ့ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုများကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုကောင်းတပုဒ်ပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာနေပြီး ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရင်ဆိုင်ကေျာ်ဖြတ်ကြတာပေါ့၊ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေဗျာ။
ယခုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမယ့် ဝတ္ထုရှည်က ဆရာဒီနိုဗို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ 'မှန်သားမြို့တော်' ပါ၊ ဇာတ်လမ်းက စုံထောက်ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း၊ မှုခင်းစုံထောက် စာရေးဆရာက လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကိစ္စတခုမှာ ပတ်သက်ရှုပ်ထွေးပြီး သူ့ကိုယ်သူ ဘဝအမျိုးမျိုးနေရာကနေ ပရမ်းပတာ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ နားလည်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့၊ လျို့ဝှက်သည်းဖို စွန့်စားခန်းဝတ္ထုကို ဒဿနဆန်ဆန် ရေးထားတဲ့၊ သမားရိုးကျ စုံထောက်ဝတ္ထုမျိုးမဟုတ်တဲ့ ပို့စ်မော်ဒန်ပုံစံဝတ္ထုတပုဒ်ပါ။ မူရင်းစာရေးသူ ပေါလ်အော်စတာ ဟာ ဒီ'မှန်သားမြို့တော်' ဝတ္ထုအတွက် တနှစ်တာ အကောင်းဆုံးလျို့ဝှက်သည်းဖိုဝတ္ထုအဖြစ် အဂ္ဂါအယ်လင်ပိုးစာပေဆု ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ မှန်သားမြို့တော် နဲ့ နောက်၂အုပ်၊ ၃အုပ်ပေါင်း (The New York Trilogy) အတွက်လည်း ဆုရရှိထားပြီး၊ အခြားဆုတံဆိပ်ပေါင်းများစွာရရှိထားသူပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာနေပြီး ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခိုင် ရင်ဆိုင်ကေျာ်ဖြတ်ကြတာပေါ့၊ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေဗျာ။
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ဆဲတတ်သူများနှင့်တစ်ညနေ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတို လေးကို ဖတ်ပြတာပါ။ သိစရာ တေွးစရာလေးတေွ ရရှိမယ်၊ နှစ်သက်ကြမယ်လို့ မေျှာ်လင့်ပါတယ်ဗျ။ အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်းမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
ဆရာမြသန်းတင့် ရဲ့ “ဓါးတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည်” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။ ညစဉ် တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဗျ။
ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ရဲ့ "သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ခိုင် "ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ကျနော့် မွေးနေ့အမှတ်တရ အဖြစ် ဆရာမဂျူး ရဲ့ “တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုး” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုလေးကို မွေးလဖြစ်တဲ့ ဇန်နဝါရီလ မှာ အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။ ချင်းတောင်တန်း တွေနဲ့ တောင်ဇလပ်ပန်းတွေ၊ တိမ်စိုင်တိမ်လိပ်တွေကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတရင်းပေါ့ဗျာ။ ခွင့်ပြုပေးတဲ့ ချစ်ခင်လေးစားရပါသော ဆရာမဂျူးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင် ဂါရ၀ပြုပါတယ်ဗျ။ အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်းမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးတဲ့ Freedom From Fear စာအုပ်ကို ဒေါက်တာအောင်ခင် ဘာသာပြန်တည်းဖြတ်သည့် "ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေ"း စာအုပ်မှ "အောင်ဆန်း" ဆိုတဲ့ စာလေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။
ဆရာသင့်လူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ နားစွင့်ကြားဟန် ရင်ခုန်သံ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။ ဂျာမနီစာရေးဆရာ ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကလောမြို့နောက်ခံပြီး ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းဖွဲ့စာအုပ်လေးပါ။
ဆရာတင်မောင်မြင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ် ဆိုတာ မူရင်းတရုတ်နာမည်ကြီးစာရေးဆရာကြီး Ha Jin ရဲ့ A Bad Joke ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတင်မောင်မြင့် မေွးနေ့အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဖတ်ပြတာပါ။
ဆရာမဂျူး ရဲ့ မြစ်တစ်စင်း၏ ဟာမိုနီ ဆိုတဲ့ စာလေးကို ဒီနေ့ ဆရာမဂျူးရဲ့မေွးနေ့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဖတ်ပြတာပါ။ သက်ရှည် ကျန်းမာ ပေျာ်ရွှင်ပါစေ ဆရာမ။
ဆရာပိုင်စိုးဝေ ရဲ့ အမေ့အတွက် ကတ်တလောက် စာအုပ်သစ် ဆိုတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို ကွယ်လွန်သူဆရာပိုင်စိုးဝေ အတွက် အမှတ်တရ ဖတ်ပြဖြစ်တာပါ။ ကောင်းမွန်ရာ ဘုံဌာနတစ်ခုမှာ အေးချမ်းသာယာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျ။
ဆရာမဂျူး ရဲ့ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း ဆိုတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။ အသံထွက်ဖတ်ပြတာမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
ဆရာသင့်လူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးထံ စာရေးမည့်သူ မရှိပါ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။ အသံထွက်ဖတ်ပြတာမှာ မှားယွင်းမှု နှင့် လိုအပ်ချက်များ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
ဆရာမကြီးမိုးမိုး(အင်းလျား) ရဲ့ နေရဲသူ့ မြေနီခင် ကို ဖတ်ပြတာပါ။ အသံထွက်ဖတ်ပြတာမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့် တာဝန်ပါ။
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ချစ်သူဖတ်ဖို့စာ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။ လိုအပ်ချက် မှားယွင်းမှုများ ရှိခဲ့လျှင် ကျနော့်တာဝန်ပါ။
မြသန်းတင့် - လူလေးသို့ပေးစာများ (၁၃ပိုင်း)
ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ လူလေးသို့ပေးစာများ ကို အလျဉ်းသင့်သလို ဖတ်ပြထားတာပါဗျ၊ အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်းမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
ဆရာမြင့်သန်း ရဲ့ ရွာ၏အခြားတစ်ဖက်ရှိ ခေျာင်းမှ ရေနောက်ကျိရသည့်အကြောင်း ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။ နားထောင်ပြီး တေွးကြည့်ကြဖို့ပါ။
ဆရာမ မေဇော် ရဲ့ ကြယ်ငေးသူ ဆိုတဲ့ အက်ဆေးလေးကို အသံထွက် ဖတ်ပြတာပါ။ အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်းမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါ။
ဆရာမိုးသက်ဟန် ဘာသာပြန်တဲ့ ရှင်နာဂါဝါမှ မေျာက်တစ်ကောင် ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ။ မူရင်း ဂျပန်စာရေးဆရာ ဟာရူကီမူရာကာမိ ရဲ့ စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာမဂျူး ရဲ့ တောင်တန်းကြီးတေွ အရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အခါ ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ၊ အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်းမှာ လိုအပ်ချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ ကျနော့်တာဝန်ပါခင်ဗျာ။
ကျွန်မပညာသည်'သည် ဆရာမကြီး ကြည်အေးရဲ့ လက်ရာကောင်းများစွာထဲက တစ်အုပ်ဖြစ်သည်ကို ဖတ်ဖူးသူများ သိပေမည်။ ထိုဂန္ထဝင်စာပေလက်ရာမွန်တစ်အုပ်အား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မောင်ဆုရှင် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည့် ဟဲမင်းဝေး၏ ကမ္ဘာကျော်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် "ပင်လယ်ပြာနဲ့တံငါအို" ဝတ္ထုကို Audio Book အဖြစ် အသံထွက်ဖတ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မောင်ဆုရှင် ဘာသာပြန်ဆိုသော "ပင်လယ်ပြာနဲ့ တံငါအို" ဝတ္ထုသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားစာပေဆု (ဘာသာပြန် ပထမဆု) ကို ရရှိခဲ့သည်။ ဟဲမင်းဝေး ရေးသားသော "ပင်လယ်ပြာနဲ့ တံငါအို " ဝတ္ထုသည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် စာပေလောကတွင် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သော ပူလစ်ဇာစာပေဆုကို ရရှိခဲ့သည်၊ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင်လည်း ဟဲမင်းဝေးသည် ယင်းဝတ္ထုကို အကြောင်းပြုပြီး စာပေဆိုင်ရာ နိုဗယ်လ်ဆုကြီး ချီးမြှင့်ခံရပြန်သည်. ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ယင်းဝတ္ထုကိုဟောလိ၀ုဒ်မှ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ဟဲမင်းဝေးသည် အသက်၆၃နှစ်အရွယ် ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင် မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်ပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့လေသည်။
ဆရာမပြည့်စုံဝင်း ရ ဲ့ အက်ဆေးလေးတေွကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ. အက်ဆေး (၁၀)ပုဒ် ပါပါတယ်ဗျ
ဆရာမကြီးကြည်အေး ရဲ့ တမ်းတတတ်သည် ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ. စဆုံး အပိုင်း(၄)ပိုင်းခွဲပြီး တင်ပေးပါ့မယ်.
ဆရာတင်မောင်မြင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ အချစ်မှတ်တမ်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ. အပိုင်းလေးတေွ ခွဲပြီးတင်ပါ့မယ်ဗျ. မူရင်း Nicholas Sparks ရဲ့ Notebook ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ.
ဆရာသင့်လူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ လေလွင့်ကြောင် ကို အသံထွက်ဖတ်ပြတာပါ. June 15 2020 မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ကြောင်လေးဘော့ဘ်အတွက် အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဖတ်ပြခြင်းပါဗျ. လူတယောက်ရဲ့ဘ၀ကို ကယ်တင်အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ ကြောင်လေးဘော့ဘ် အကြောင်း နားဆင်ခံစားကြည့်ပါဦး.
ဆရာမြင့်သန်း မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဆရာ့ဝတ္ထုတိုလေးကို အသံထွက် ဖတ်ထားတာပါ "မိုးကုန်ပြီးစတစ်နေ့၌ ကျေနပ်စွာလွမ်းဆွတ်ရခြင်း"
ဆရာကြီးသခင်ဘသောင်း ဘာသာပြန်မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ ခြေလေးခေျာင်းတော်လှန်ရေး ကို အသံထွက်ဖတ်ထားတာပါ. အခန်းစဉ်အလိုက် အပိုင်းလေးတေွခွဲပြီး တင်ထားပါတယ်. အခန်း(၁)ကနေ အခန်း (၁၀) ဇာတ်သိမ်းအထိ အားလုံး (၁၀)ပိုင်းပါ
ဆရာ မျိုးဇော်ဝင်း ရဲ့ "ကြောင်တွေ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာ" ဒီစာအုပ်လေး ဖတ်ပြီး သဘောတေွကျမိလို့ အခန်းလေး တစ်ခန်းကို အသံထွက် ဖတ်ကြည့်မိတာပါ
ရုရှားစာရေးဆရာကြီး Anton Checkhov ရဲ့ The Kiss ကို ဆရာတင်မောင်မြင့် က ထိုအနမ်း လို့ ဘာသာပြန်ထားတာပါ. ကျနော်က အသံထွက်ပြီး ဖတ်ပြတာပါ.